«LA MAIN DE L’OCEAN INDIEN»: namoaka ny boky angano i Masoandrontsoa. | NewsMada
Tsy ny tontolon’ny filalaovana tantara an’onjampeo ihany no nahafantarana an’i Rojo, amin’ilay feo feno angola mamy fa eo ihany koa ny tontolon’ny fanoratana amin’ny endriny maro, anisan’izany ny Angano…
Tsy angano angano intsony, efa vita ny boky mirakitra ny angano “La main de l’océan indien” nosoratan’ i Ma­soandrontsoa. Boky angano ahitana takila 40, natao amin’ny teny frantsay izy ity. Natonta tsy ela akory tao anatin’ny fihibohana, tany Frantsa. Boky faharoa, taorian’ny «Ampelahasinoro», izay boky tantara foronina amin’ ny teny malagasy ranoiray. «Na­tao tamin’ny teny frantsay ilay boky satria io no teny iraisana sy hifankahazoana voalohany amin’ireo Nosy ao amin’ny Ra­no­masimbe Indianina. Ny boky rahateo mitantara ny hakan­ton’ireo Nosy ao amin’ny Ra­no­ma­simbe Indianina ireo ka An­dri­amatoa Foudi rouge (Foudia madagascariensis, na Fodilahy mena, hoy isika) no hitondra antsika hitety azy ireo ao anatin’ity boky “La main de l’océan indien” ity» hoy i Masoan­dron­tsoa, nanazava momba ny boky.
Manandratra ny kolontsaina amin’ny alalan’ny teny
Ranaivoarisoa Rojontsoa Tsi­hoarana na Rojo Ra­nai­vo­arisoa eo amin’ny tontolon’ny tan­tara an’onjampeo na Ma­soandrontsoa, anarana isalorana amin’ny maha mpanoratra. Ny taona 2003 no niditra teo amin’ ny tontolon’ny literatiora mala­gasy. Efa maro ny sehatra nanehoany ny maha izy azy, indrindra ny famelomana tantara an’ onjampeo, izay tena nahafantaran’ny maro azy. “ Ao an-tsaina hatrany ny hanandratana ny kolontsaina amin’ny alalan’ny teny, indrindra ny mahakasika an’i Madagasikara sy ny kanto mahafinaritra ao aminy, izany no tena ilofosako eo amin’ny ton­tolon’ny zavakanto malagasy” hoy i Masoandrontsoa, nilaza ny tanjony amin’ny literatiora malagasy. Anisan’ny ezaka amin’ny fanitarana ny tontolon’ny literatiora malagasy ho fantatra eran-tany ny fandikana sy fanoratana ny sanganasa amin’ ny teny vahiny amin’ny alalan’ ny fanahy malagasy ao anatiny.